आफ्नो कान छामौ! कागको पछाडी नभागौ « Pana Khabar
प्रकाशित मिति : Apr 1, 2018
समय : 1:58 am
-बाल कुमार क्षेत्री
धर्म ज्ञान पनि हो जसको सहि अनुशरणले हामीलाई सहि बाटोमा निर्देशन दिन्छ। खराब बैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा भने झैं गलत अर्थ र गलत बुझाइले गलत दिशामा निर्देश गर्दछ। अग्रज भनौ या धर्मका कुनै-कुनै ठेकेदारहरुले यसलाई गलत व्याख्या गरेर हाम्रो दिमागमा धर्म सम्बन्धी अन्धबिश्वासले प्रवेश गर्यो। जसले गर्दा कतिपय कुराहरु विवादित बनेर बसेका छन्। मलाई बडो अचम्म लाग्छ। जबकी यो संसारका सृष्टिकर्ता एउटै हो भने मन्दिर, मस्जिद र चर्चमा किन बाँडे होलान ? तितो सत्य भन्नुपर्दा आज मानिस यहि कारण स्वार्थी बनेको छ। यसैलाई राजनीतिक औजारको रुपमा प्रयोग गरेको छ यहि कारण आज हाम्रो समाज अझै बिखण्डन अनि बिनासतिर गैरहेको छ।
धर्म एक प्रकारको कर्म पनि हो। मानव जगतमा मात्र नभई पदार्थ जगतमा पनि कर्मको साथ धर्म पनि देखिन्छ। जस्तै:-आगोको धर्म जलाउनु, पानीको धर्म बगाउनु, सुर्यको धर्म ताप र उज्यालो दिनु इत्यादी। यस सृष्टिका जीवजन्तु, बोट बिरुवा तथा पदार्थले पनि आफ्नो धर्म र कर्म पूरा गरिरहेका छन् भने सबै कुरा जानेर बुझेर पनि हामी मानव यति लाचार किन?
धर्म र संस्कृतिको नाममा हामीले गर्दै आएका केही कार्यहरु:-संस्कृति र परम्पराको नाममा कुनै मठ मन्दिरमा पशुबली,गौ हत्या,केही क्षेत्रमा चौरीको आलो रगत पिउने चलन, कसै-कसैको कुल पुजा तथा मौलिक पर्बहरुमा पशुबध जस्ता कार्यहरुलाई धार्मिक कार्यमा जोडदा त्यति शोभा दिदैन कि? यदि पशुबधको अन्त्य गर्न सकिँदैन भने यसको लागि सुरक्षित स्थानमा बधशालाको व्यबस्था होस्।सार्वजनिक स्थलमा सबैले देख्नेगरी कुनैपनी प्रा‍णीको हत्या तथा काटमार नगर्दा कसो होला? साथै आफ्नो रितिरिवाजले अरुको रितिरिवाजलाई कुनै असर नपुर्याइकन मनाउँदा हुँदैन र ? कुनै कुनै कुराहरुमा रितिरिवाज र परम्परा भन्दा अलि माथी उठे कसो होला ? जस्तै अन्तर्जातिय बैबाहिक सम्बन्धलाई नकारात्मक सोच अर्थात् अपराध नसम्झँदा कसो होला ? हाम्रो देशमा अझैसम्म पनि छुवाछूतको प्रथा कायमै छ।
नेपाल एक प्राकृतिक सुन्दरताले मात्र नभएर बहुभाषिक, बहु-साँस्कृतिक परम्पराले सजिएको हामी सबैको साझा फुलबारी हो।संकीर्ण सोचको बिकास गर्दै, जातीय भेदभावले ग्रसित अन्धबिश्वासको जालो चिर्दै, सबैका धार्मिक बिचारलाई सम्मान गर्दै आपसी सद्भावको मल र सबै सम्प्रदायको सम्मानरुपि शुद्ध पानीले सिंचित गर्दै समृद्ध नेपालको साझा फुलबारीलाई गोडमेल गरौं । अन्धबिश्वासी सोचाइलाई परिमार्जित गरि दिमागलाई शुद्ध तरिकाले अग्रगामी उज्यालो दिशातिर बढाउँदै जाऔं।
त्यो ‘अन्धकार युग’ र यो ‘स्वर्णयुग’
किन अलपत्र पर्‍यो ३३ किलो सुन काण्ड अनुसन्धान
दुई तिहाईको सरकार किन कमजोर ?
ज्युँदो नरहेकै हो त न्याय ?
सुनिल थापा भन्छन्-शरणार्थीबारे भुटानसँग द्विपक्षीय कुरा हुन नसक्नु परराष्ट्र नीतिको कमजोरी
६५ हजारमा भारतले किन्न खोजेकी माननीय : भद्रकुमारी घले